မဒေါင်းလုပ် Skype မအဘို့ Windows
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Windows (74.50 MB)
Skype သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိကွန်ပျူတာနှင့်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအသုံးပြုသောအခမဲ့ video chat နှင့် messaging application များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်စာပို့ရန်၊ စကားပြောရန်နှင့်ဗွီဒီယိုချက်တင်စကားပြောခွင့်ပြုသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်အတူအိမ်နှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများကိုသင်ဆန္ဒရှိလျှင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။
အသုံးပြုသူများကို၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း Multip platform support ကြောင့် Skype သည်အသုံးပြုသူများအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်ရန် P2P နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောအသံနှင့်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေး (သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်)၊ စကားပြောဆိုမှုသမိုင်း၊ ကွန်ဖရင့်များ၊ လုံခြုံသောဖိုင်ပြောင်းခြင်းစသည့်အဆင့်မြင့်သောအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောပရိုဂရမ်သည်အသုံးပြုသူများလိုအပ်သည့်အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများကိုပေးသည်။ မြင့်မားသောအင်တာနက်အသွားအလာအသုံးပြုမှုနှင့်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များအတွက်ဝေဖန်ခံရသော်လည်း Skype သည်စျေးကွက်တွင်ယခုအချိန်အထိအထိရောက်ဆုံး messaging နှင့် video chat application များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Skype ကိုဘယ်လို ၀ င်ရမယ်
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Skype ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးတပ်ဆင်ပြီးနောက်သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်သောအခါအသုံးပြုသူအကောင့်မရှိလျှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုသူအကောင့်ကိုအရင်လုပ်ရမည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်လို့သင့်မှာဒီနေရာမှာ Microsoft အကောင့်တခုရှိရင်၊ သင့် Microsoft အကောင့်နဲ့ Skype ကို log in လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ လိုအပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြီးစီးပြီးနောက်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ Skype အသုံးပြုသူများနှင့်သင်အခမဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။
သင့်တွင် Skype သို့မဟုတ် Microsoft အကောင့်ရှိပြီးဖြစ်ပါက Skype သို့ဆိုင်းအင်ဝင်ရန်ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
Skype ကိုဖွင့်ပါ၊ ပြီးနောက် Skype အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏ Skype အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ (သို့) ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပြီးနောက်ဝင်ရောက်ရန်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးဆက်ရန်မြားကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ Skype session ကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ သင်ဆိုင်းအင်ဝင်ပြီးနောက်၊ Skype သည်သင်ပိတ်လိုက်သောအခါသို့မဟုတ်သင်၏ထွက်ပေါက်နှင့်အကောင့်ဆက်တင်များကိုရွေးချယ်သောအခါသင်၏ဆိုင်းအင်ဝင်သတင်းအချက်အလက်ကိုမှတ်မိသည်။
သင့်တွင် Skype (သို့) Microsoft အကောင့်မရှိဘူးဆိုရင်၊ ဒီ Skype ကိုဆိုင်းအင်လုပ်ဖို့အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ -
သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာရှိ Skype.com သို့သွားပါသို့မဟုတ်အထက်ပါ Skype ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
အသံ၊ ခေါ်ဆိုမှု၊ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်စုပေါင်းညီလာခံခေါ်ဆိုမှုများ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုစကားပြောခြင်း၊ လုံခြုံသောဖိုင်ပြောင်းခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် Skype ၏အကူအညီဖြင့်အကွာအဝေးများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။
သင်၏သူငယ်ချင်းစာရင်းကိုလည်းပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းများအတွက်အုပ်စုများကိုဖန်တီးနိုင်သည်၊ သင်၏ကွန်ပျူတာရှိလူအမျိုးမျိုးကိုပြသရန်သို့မဟုတ်ကူညီရန်မျက်နှာပြင်မျှဝေခြင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ စာအဆက်အသွယ် / စကားပြောဆိုမှုသမိုင်းအင်္ဂါရပ်ကြောင့်သင်ယခင်စာပေးစာယူကိုကြည့်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်ပေးပို့လိုက်သောမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ကွဲပြားသောအသုံးအနှုန်းများကိုသုံးသည်။ သင်၏စာတိုပေးပို့စဉ်အတွင်းသင်အကြိုက်ဆုံးများကိုသူငယ်ချင်းများထံပို့နိုင်သည်။
Skype ၏ user interface သည်အလွန်အလိုလိုသိပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူများအားလုံးသည် Skype ကိုအခက်အခဲမရှိအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်း၊ အခြေအနေအကြောင်းကြားစာ၊ အဆက်အသွယ် / သူငယ်ချင်းစာရင်း၊ ဂန္ထဝင်စာတိုပေးပို့ရေးပရိုဂရမ်များအားလုံးအပေါ်မကြာသေးမီကပြောဆိုမှုများသည်သုံးစွဲသူ၏မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Skype ဖိုင်တွဲ၊ အုပ်စုလိုက်ဆက်တင်များ၊ ရှာဖွေရန်နေရာနှင့်ပေးဆောင်ထားသောရှာဖွေရေးခလုတ်များကိုပရိုဂရမ်၏အဓိက ၀ င်းဒိုးရှိအသုံးပြုသူများကိုလည်းတင်ပြသည်။ ပရိုဂရမ်မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်သင်ရွေးချယ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုပြသမည်ဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရန်စာရင်းတွင်သင်ရွေးချယ်ထားသူများနှင့်သင်ပြုလုပ်ထားသောစကားဝိုင်းပြတင်းပေါက်များကိုပြသလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်မြန်ဆန်သောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိပါကမည်သည့်အခြားစာတိုပေးပို့ရေးအစီအစဉ်တွင်မဆို Skype တွင်အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ၏အရည်အသွေးကိုသင်ရှာမတွေ့နိုင်ဟုငါပြောနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အား VoIP ဝန်ဆောင်မှုများထက်အသံနှင့်ပုံရိပ်အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်း၊ အကယ်၍ သင့်တွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှေးနှေးလျှင်၊ အသံပျက်ပြားခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးခြင်းများကိုသင်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်သင့်မှာမကောင်းတဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုင်းရှိရင်တောင်မှသင်ဟာပြproblemsနာမရှိဘဲ Skype ရဲ့ messaging feature ကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။ ပရိုဂရမ်ရှိခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးခလုတ်သည်သင့်အားထိုအချိန်တွင်သင်ခေါ်ဆိုနေသည့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်အသံစကားပြောဆိုမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။
Skype ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး Install လုပ်ပါ
အကယ်၍ သင်သည်ထိရောက်သောနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောစာတိုပေးပို့ရေး၊ အသံခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအစီအစဉ်ကိုရှာဖွေနေပါကစျေးကွက်ထဲတွင် Skype ထက်ပိုကောင်းမည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Microsoft မှ ၀ ယ်ယူခဲ့သော Skype သည် platform အားလုံးကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး Microsoft ၏လူကြိုက်များသော messaging application ဖြစ်သော Windows Live Messenger (သို့) MSN ကိုတူရကီသုံးစွဲသူများအကြားသိရှိခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားပါကကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်ကြောင်းနောက်တစ်ကြိမ်သင်သဘောပေါက်လိမ့်မည် ငါက
အသံနှင့် HD ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုခြင်း - ကြည်လင်ပြတ်သားသည့်အသံနှင့် HD ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုခေါ်ဆိုမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်အုပ်စုလိုက်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်တွေ့ကြုံခံစားပါ။
Smart messaging - ပျော်စရာကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံးကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပါ (သို့) တစ် ဦး တစ်ယောက်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိရန် @ နိမိတ် (ဖော်ပြ) ကိုသုံးပါ။
မျက်နှာပြင်မျှဝေခြင်း - ပါဝင်သည့်မျက်နှာပြင်မျှဝေခြင်းဖြင့်သင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိတင်ဆက်မှုများ၊ ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်အခြားအရာများကိုလွယ်ကူစွာမျှဝေပါ။
ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ခေါင်းစဉ်တပ်ခြင်း - အထူးအချိန်လေးများကိုဖမ်းယူရန်၊ အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချရေးရန်နှင့်ပြောဆိုသောအရာများကိုဖတ်ရန်တိုက်ရိုက်စာတန်းများကိုအသုံးပြုရန်မှတ်တမ်းတင်ရန် Skype ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း။
ဖုန်းများခေါ်ခြင်း - အော့ဖ်လိုင်းရှိဖုန်းများနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့်တတ်နိုင်သောနိုင်ငံတကာခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားများဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ Skype အကြွေးဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့လိုင်းဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုအလွန်နိမ့်သောနှုန်းထားဖြင့်ခေါ်ဆိုပါ။
သီးသန့်စကားပြောဆိုမှုများ - Skype ကသင်၏အထိခိုက်မခံတဲ့ပြောဆိုမှုများကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်အဆုံးမှအဆုံးသို့စာဝှက်ဖြင့်လျှို့ဝှက်ထားသည်။
တစ်ကြိမ်သာအွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများ - အစည်းအဝေးများကိုစီစဉ်ပါ၊ Skype အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးလော့ဂ်အင်လုပ်စရာမလိုပဲတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်တွေ့ဆုံပါ။
SMS ပို့ခြင်း။ Skype မှစာတိုပေးပို့ချက်များကိုတိုက်ရိုက်ပို့ပါ။ Skype ကိုမည်သည့်အချိန်မဆို၊ ဘယ်နေရာမှမဆိုအွန်လိုင်း SMS မှတဆင့်ဆက်သွယ်ရန်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းကိုရှာဖွေပါ။
နောက်ခံအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ဤအင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်သောအခါသင့်နောက်ခံအနည်းငယ်မှုန်ဝါးသွားလိမ့်မည်။ သင်၏နောက်ခံပုံကိုသင်လိုချင်လျှင်ပုံတစ်ပုံနှင့်အစားထိုးနိုင်သည်။
ဖိုင်များပေးပို့ခြင်း - ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားဖိုင်များကို 300MB အထိအလွယ်တကူဖလှယ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုသင်၏စကားဝိုင်းပြတင်းပေါက်သို့ဆွဲ တင်၍ ဖြုတ်နိုင်သည်။
Skype ဘာသာပြန်သူ - အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှု၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများနှင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့မှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဘာသာပြန်ဆိုခြင်းမှအကျိုးရယူပါ။
Call forwarding - သင်၏ Skype ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါစို့၊ သင် Skype သို့ဆိုင်းအင်မ ၀ င်သောအခါသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကိုမဖြေနိုင်လျှင်အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန်မည်သည့်ဖုန်းကိုမဆိုဆက်သွယ်ပါ။
Caller ID - အကယ်၍ သင်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့မဟုတ်လိုင်းဖုန်းများကို Skype မှခေါ်ဆိုပါကသင်၏မိုဘိုင်းနံပါတ်သို့မဟုတ် Skype နံပါတ်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ (ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်။ )
Skype To Go - မည်သည့်ဖုန်းမှမဆိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနံပါတ်များကို Skype To Go ဖြင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာခေါ်ဆိုပါ။
ဖုန်း၊ Desktop၊ တက်ဘလက်၊ ဝဘ်၊ Alexa၊ Xbox နှင့် Skype တစ်ခုစီသင့်စက်ပစ္စည်းအားလုံးအတွက်! ကမ္ဘာအနှံ့ရှိချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန် Skype ကိုယခု Install လုပ်ပါ။
Skype ကို Update လုပ်နည်း
Skype ကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းသည်အရေးကြီးပြီးသင်နောက်ဆုံးပေါ်အင်္ဂါရပ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ Skype သည်အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတိုးတက်စေရန်နှင့်လုံခြုံရေးတိုးတက်စေရန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်၊ Skype ၏မူကွဲအဟောင်းများကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါကသင်သည်ဤအဟောင်းဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုကိုဆက်လက်အသုံးပြုပါကသင်သည် Skype မှအလိုအလျှောက်ဆိုင်းအင်လုပ်နိုင်ပြီးသင်နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်သည်အထိသင်ထပ်မံ ဝင်ရောက်၍ မရနိုင်ပါ။ သင်သည် Skype အက်ပ်ကိုမွမ်းမံသောအခါ၊ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်ကသင့်စကားဝှက်မှတ်တမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။ အသစ်ပြောင်းခြင်းပြီးနောက်အစောပိုင်းရက်စွဲများမှသင်၏စကားဝှက်မှတ်တမ်းကိုသင်မရနိုင်ပါ။ Skype နောက်ဆုံးဗားရှင်းသည်အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
နောက်ဆုံး Skype ၏နောက်ဆုံးမူကို download လုပ်ရန်နှင့်ဝင်ရန်အထက်ရှိ Skype download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Windows 10 အတွက် Skype ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင် Microsoft Store မှအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ Windows7နှင့် 8 ရှိ Skype အက်ပ်ကိုမွမ်းမံရန်၊
အသစ်ပြောင်းခြင်းအတွက်စစ်ဆေးရန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ Skype မှ Help menu ကိုသင်မတွေ့ပါက toolbar ကိုပြသရန် ALT ကိုနှိပ်ပါ။
မဖိုင်အရွယ်အစား: 74.50 MB
တီထွင်သူ: Skype Limited
BiP Messenger သည် Turkcell...
လူကြိုက်များသောမိုဘိုင်း messaging app Viber သည် ၀ င်းဒိုးတွင်ရနိုင်သည်။ Viber ၀...
ယုံကြည်စိတ်ချရသော chat program ICQ သည်၎င်း၏ ICQ 8...
Twitch ကိုမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံး Twitch စီးများ၊...
Cyber ​​Dust သည် Snapchat...
TeamSpeak3သည်အထူးသဖြင့်ကစားသမားများကြားတွင်လူကြိုက်များသောအသံနှင့်အုပ်စုလိုက်စကားပြောခွင့်ပြုသည်။...
mobile messaging application တစ်ခုဖြစ်သည့် LINE ၏ desktop version ကြောင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏...
Yahoo! မေးလ်သည် Windows 10 ကွန်ပျူတာနှင့်တက်ဘလက်သုံးစွဲသူများအတွက် Yahoo ၏အီးမေးလ် application...
Facebook Messenger ပရိုဂရမ်ဖြစ်သော Facebook Messenger အတွက် Windows Messenger...
Trillian သည်instantရိယာတစ်ခုတည်းမှလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး ၀...
Hangouts Chat သည်အဖွဲ့များအတွက် Google ၏ messaging platform ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Facebook Workplace၊...
ChatON သည် Samsung မှ ထုတ်လုပ်သော အမေရိကနှင့် ပြင်သစ်တွင် အသုံးများသော မိုဘိုင်းလ်စာတိုပေးပို့ခြင်း...
SplitCam virtual video capture driver သည် သင့်အား ဗီဒီယိုရင်းမြစ်တစ်ခုတည်းမှ ပုံများကို...
ယနေ့တွင်၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သော အခြားရွေးချယ်စရာပရိုဂရမ်များစွာရှိပါသည်။ Zello...
Ventrilo သည် အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသူများ အချင်းချင်းစုပေါင်းစကားပြောသည့်...
Voxox ပရိုဂရမ်သည် Windows နှင့် အခြားသော မိုဘိုင်းလ်နှင့် PC ပလပ်ဖောင်းများတွင် ရရှိနိုင်သော အခမဲ့...
AOL Instant Messenger ကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိ AOL Instant Messenger ကို အသုံးပြု၍ သင့်သူငယ်ချင်းများ...
KakaoTalk သည် အသုံးပြုသူ သန်း 100 ကျော်ရှိသော အခမဲ့ အသံချတ်နှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်း...
Slack သည် တစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့များ အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းတစ်ခု...